ငွေဌေး(ဟင်္သတ)၏ ဓမ္ဓဖြင့် ရဲရင့်ခြင်း စာအုပ်ထွက်ရှိ | MoeMaKa Burmese News & Media
ငွေဌေး(ဟင်္သတ)၏ ဓမ္ဓဖြင့် ရဲရင့်ခြင်း စာအုပ်ထွက်ရှိ
SK ရှန်လိန်း၊ မိုးမခစာအုပ်စင်၊ နိုဝင်ဘာ ၁၁၊ ၂၀၁၆
ချင်း ဗုဒ္ဓသာသနပါလက အဖွဲ့က ၃-လ တကြိမ် ပုံမှန်ထုတ်ဝေနေသော ချင်းရောင်ခြည်မဂ္ဂဇင်းတွင် ဓမ္ဓစာမူများကို ပင်တိုင်ရေးသား ချီးမြှင့်ပေးနေသော ဆရာငွေဌေး(ဟင်္သာတ)၏ ဆောင်းပါးများကို စုစည်းထားသော စာအုပ်ဖြစ်သည်။ဓမ္မရိပ်မဂ္ဂဇင်းပါ စာမူများလည်းပါရှိသည်။
သာသနာပြုစိတ်ဓါတ် အပြည့်အ၀ဖြင့် စာပေရေးသားနေသော ဆရာဦးငွေဌေးကို ဂုဏ်ပြုလိုသောကြောင့် ချင်း ဗုဒ္ဓသာသနပါလကအဖွဲ့က စာအုပ်ကို ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာ ဂုဏ်ယူစွာ စီစဉ် ထုတ်ဝေသည်ဟု ဖေါ်ပြထားသည်။ စာအုပ်တွင် ပါဝင်သောစာမူအမည်များကို မာတိကာဓါတ်ပုံတွင် လေ့လာနိူင်သည်။
စာအုပ် အလိုရှိသူများ ၊ဖုံး-၀၁ ၅၈၀၁၃၈၊ဖုံးနှင့် ဗိုင်ဘာ-၀၉ ၃၀၀၀၄၉၇၄ ၊ ဖုံး-၀၉၇၉၉၆၇၉၉၅၉သို့ဆက်သွယ်နိုင်သည်ဟု ဖေါ်ပြထားသည်။
ဆလိုင်းရွှေလင်း ၊ အမှတ် ၃၁ နှင်းဆီကုန်းလမ်း၊အလုံ၊ ရန်ကုန်က ထုတ်ဝေပြီး ၊ ဦးအောင်ကျော်ထူး ၊မြတ်ပန်းရဂုံပုံနှိပ်တိုက်က အဖုံးနှင့်် အတွင်းစာသားများကို ပုံနှိပ်သည်။၂၀၁၆ ဒီဇင်ဘာလတွင် ပထမအကြိမ်၊ အုပ် ၁၁၀၀ ကို ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသည်။တန်ဖိုး ၈၀၀-ကျပ်ဖြစ်သည်။
Tags: SK ရှန်လိန်း
ဆလိုင်းဟန်လင်း၏ “ကမ္ဘာတလွှား ချင်းအမျိုးများ ဆောင်းပါးများ စုစည်းမှုစာအုပ်” ထွက်ပြီ (0)
ဆလိုင်းနီဝိုင်၏ ချင်းအတွက် စပ်ဖျင်းဖျင်းကဗျာများ စာအုပ် (0)
ချင်းရောင်ခြည်မဂ္ဂဇင်း အမှတ် (၁၅) ထွက်ပြီ (0)
ချင်းရိုးရာ ပါးမဲထိုးပွဲ ချင်းဗုဒ္ဓသာသနအဖွဲ့ ကျင်းပ (0)
ချင်းရဟန်းတော် အရှင်ပညာသာမိ၏” နှလုံးသားထဲက ငယ်ဆရာ” စာအုပ်ထွက်ရှိ (0)
အလားတူ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ စာများ၊ ဆောင်းပါးများ ...:စာအုပ်စင်
ဇင်လင်း ● အပြုတ်တိုက်မည်ဆိုသော စိတ်ဓါတ်မျိုးဖြင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ရမည်ထင်နေသလား
ကာတွန်း ကိုခေတ်ရဲ့ နားပဲ နားစေ ....
ဓမ္မဘေရီ အရှင်ဝီရိယ (တောင်စွန်း) - အိမ်တွင်း သတိပဋ္ဌာန် "ပစ္စုပ္ပန်"
မိုက်ခဲစိန် - သမ္မတထရန့်လက်အောက်မှာ အမေရိကန်ခင်ဗျာ အရူးကို လင်လုပ်ရသလို
အောင်ငြိမ်းချမ်း၊ ဝင်းနန္ဒာ/Myanmar Now ● ဘုန်းကြီးကျောင်း ငရဲခန်းမှာ လပေါင်းများစွာ
ကျော်ဟုန်း - ဘီလူးစည်းကို ကျော်ဖြတ်ခြင်း
ဒေါက်ထက် (ယူကေ) ● ဘိလပ်ကသူရဲ၊ မြန်မာပြည်ကသူရဲနှင့် ဘီရိုကြီး
ဒါရိုက်တာပန်းချီဆရာ ၀င်းဖေနဲ့ ခေတ်ပေါ်ပန်းချီဆရာ ၄ဦးရဲ့ တဒင်္ဂ အမည်ရတဲ့ပန်းချီပြပွဲ
Burmese Embassy in Singapore - မြန်မာသံရုံး (စင်္ကာပူ)
Burmese Second-Hand Books Stalls - ရန်ကုန်မှ စာအုပ် အဟောင်းဆိုင်များ
Myanmar NOW News Agency
Wun Zin E-Book Online - ၀န်ဇင်း၊ မြန်မာစာအုပ် အီးဘုတ်ဆိုင်
Mya Thara Phyu Store - မြသရဖူ စတိုးနဲ့ ကုန်စုံဆိုင်
Chit Ma Ma Salon - ချစ်မမ လှရိပ်မြုံ
Thant Zaw Oo - LCCI Accounting Classes - ဆရာသန့်ဇော်ဦး၏ စာရင်းကိုင်လက်မှတ်ရ သင်တန်း
Selections from Colourful Burma by Khin Myo Chit . ရောင်စုံလှစွာ ပြည်မြန်မာ - ဒေါက်တာခင်မောင်ဝင်း
အောင်မော်ဦး ● သည်ပြည်မှာ ဘေးဘယာ ဝေးကွာကြစေသား (စာအုပ်အတွေး၊ စာအုပ်အရေး)
SK ရှန်လိန်း - ချင်းရောင်ခြည် အမှတ် ၁၀ ထွက်ရှိလာပါပြီ
ချင်းရဟန်းတော် အရှင်ပညာသာမိ၏" နှလုံးသားထဲက ငယ်ဆရာ" စာအုပ်ထွက်ရှိ
ခင်လွန်း ● ရဲထွဋ်ရေးတဲ့စာ (သို့) အမှန်တရားအတွက် ဇီဝဇီုးအန်ဖတ်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လက်ရွေးစင်မိန့်ခွန်းပေါင်းချုပ် သြစတြေးလျမှာ ဖြန့်ချိ
မိုးမခ မဂ္ဂဇင်း ဇွန်လကို စာအုပ်ဆိုင်ကြီးများတွင် မေးဝယ်ပါ
မောင်စွမ်းရည် - “ ကျော်ကိုကိုရေးတဲ့ ကျောင်းသားသမဂ္ဂသမိုင်း”
မိုးမခ မတ်လ ပုံနှိပ်စာစောင် မတ်လကုန်မှာ ထွက်ပါတယ်
အောင်ဒင်ရဲ့ ကဗျာ လုံးချင်းစာအုပ် ထွက်ပြီ
မင်းဆွေနှစ် စီစဉ်တဲ့ မြန်မာကဗျာ လက်ရွေးစင်ဆောင်းပါးများ
Join 93,736 other subscribers
နှစ်အလိုက် ပြန်ရှာရန် Select Month May 2018 (169) April 2018 (184) March 2018 (162) February 2018 (145) January 2018 (195) December 2017 (157) November 2017 (193) October 2017 (154) September 2017 (148) August 2017 (163) July 2017 (180) June 2017 (195) May 2017 (240) April 2017 (190) March 2017 (243) February 2017 (253) January 2017 (234) December 2016 (210) November 2016 (276) October 2016 (257) September 2016 (238) August 2016 (262) July 2016 (256) June 2016 (238) May 2016 (292) April 2016 (271) March 2016 (286) February 2016 (277) January 2016 (245) December 2015 (281) November 2015 (330) October 2015 (356) September 2015 (303) August 2015 (299) July 2015 (245) June 2015 (229) May 2015 (125) April 2015 (163) March 2015 (227) February 2015 (199) January 2015 (225) December 2014 (216) November 2014 (198) October 2014 (226) September 2014 (209) August 2014 (242) July 2014 (240) June 2014 (214) May 2014 (252) April 2014 (242) March 2014 (230) February 2014 (234) January 2014 (281) December 2013 (237) November 2013 (205) October 2013 (246) September 2013 (261) August 2013 (295) July 2013 (285) June 2013 (248) May 2013 (249) April 2013 (441) March 2013 (285) February 2013 (267) January 2013 (319) December 2012 (309) November 2012 (248) October 2012 (229) September 2012 (209) August 2012 (242) July 2012 (281) June 2012 (264) May 2012 (230) April 2012 (222) March 2012 (230) February 2012 (187) January 2012 (279) December 2011 (286) November 2011 (237) October 2011 (277) September 2011 (234) August 2011 (193) July 2011 (248) June 2011 (286) May 2011 (194) April 2011 (256) March 2011 (224) February 2011 (153) January 2011 (179) December 2010 (167) November 2010 (218) October 2010 (219) September 2010 (228) August 2010 (163) July 2010 (163) June 2010 (175) May 2010 (190) April 2010 (158) March 2010 (158) February 2010 (143) January 2010 (156) December 2009 (160) November 2009 (143) October 2009 (128) September 2009 (126) August 2009 (139) July 2009 (163) June 2009 (149) May 2009 (199) April 2009 (150) March 2009 (172) February 2009 (135) January 2009 (144) December 2008 (127) November 2008 (140) October 2008 (142) September 2008 (142) August 2008 (159) July 2008 (122) June 2008 (114) May 2008 (155) April 2008 (148) March 2008 (129) February 2008 (127) January 2008 (104) December 2007 (71) November 2007 (110) October 2007 (42)
သျှင်မိုးပြေး ● ဒီဓါတ်ခွဲခန်းမှာ ကိုယ်ဟာ ပိုလျှံပစ္စည်း https://t.co/OkkYkAk0Y8 https://t.co/pcMEKgh9gc about9hours ago ReplyRetweetFavorite
လွင် (ဘော်တွင်း) ● ချစ်သူနှင်းဆီ https://t.co/pAdrAeFaxC https://t.co/Qk0ad1oKDM about9hours ago ReplyRetweetFavorite
ဇင်လင်း ● အပြုတ်တိုက်မည်ဆိုသော စိတ်ဓါတ်မျိုးဖြင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ရမည်ထင်နေသလား https://t.co/tz4M5Jy5KM https://t.co/7quo8ratHP about 19 hours ago ReplyRetweetFavorite
ကာတွန်း ကိုခေတ်ရဲ့ နားပဲ နားစေ …. https://t.co/ke5vmBc3dz https://t.co/vdnBJwHv30 about 19 hours ago ReplyRetweetFavorite
ဓမ္မဘေရီ အရှင်ဝီရိယ (တောင်စွန်း) – အိမ်တွင်း သတိပဋ္ဌာန် “ပစ္စုပ္ပန်” https://t.co/GZKvBYh5Ro https://t.co/dWdJ4n94K6 09:58:05 AM May 26, 2018 ReplyRetweetFavorite
SMART Translation & Interpretation Service - (English = Myanmar)
Royal Shop - မြန်မာအွန်လိုင်း စာအုပ်အရောင်းဆိုင် (အိမ်အရောက်ပို့မည်)
Pen Myanmar - မြန်မာ ကလောင်ရှင်များ
MoeMaKa Network - မိုးမခနဲ့ မိတ်ဆွေများ (31)
Online Shop @ MoeMaKa (12)
About MoeMaKa (86)
ခရီးသွား ဆောင်းပါး (70)
ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် (180)
ဇော်အောင် (မုံရွာ) (151)
Law Eh Soe (30)
K ငြိမ်းချမ်း (19)
Yan Naung (Bo Ta Htaung) (340)
ကာတွန်း – အောင်မော် (120)
ကာတွန်း ATH (206)
ကာတွန်း ဇာနည်ဇော်ဝင်း (60)
ဒေါက်တာခင်မောင်ဝင်း (သချာင်္) (71)
Photo Essays (27)
မိုးမခကို ပေးတဲ့စာ (268)
ရေခြားမြေခြား မြန်မာများ (218)
သမိုင်းနဲ့ အစဉ်အလာ (1,029)
လူများ၊ ရုပ်ပုံလွှာများ (397)
ဖြစ်ရပ်များ၊ အမှတ်တရများ (198)
Cartoon Box (3,444)
Burmese Monastery in West Coast, USA
ရဲဘော် မောင်တူးရဲ့ သက်ရှိပန်းချီ
ရဲဘော် မောင်တူးရဲ့ သက်ရှိပန်းချီ (မိုးမခစာအုပ်စင်) မေ ၃၊ ၂၀၁၈ ခေါင်းစဉ်...
မိုးမခမဂ္ဂဇင်း မေ ၂၀၁၈၊ အတွဲ ၅၊ အမှတ် ၁ ထွက်ပြီ
မိုးမခမဂ္ဂဇင်း မေ ၂၀၁၈၊ အတွဲ ၅၊ အမှတ် ၁ ထွက်ပြီ...
ဂျူနီယာဝင်းရဲ့ မြန်မာနေ့ရက်များနှင့် ပန်းများ စာအုပ် ထွက်ပြီ
ဂျူနီယာဝင်းရဲ့ မြန်မာနေ့ရက်များနှင့် ပန်းများ စာအုပ် ထွက်ပြီ (မိုးမခ) မတ် ၂၄၊ ၂၀၁၈...
ဇော်အောင်(မုံရွာ) ၏ ပြည်မြန်မာ မီးထိန်ထိန်သာဖို့အရေး မိုးမခဆောင်းပါးများ (ထွက်ပြီ)
ဇော်အောင်(မုံရွာ) ၏ ပြည်မြန်မာ မီးထိန်ထိန်သာဖို့အရေး မိုးမခဆောင်းပါးများ (ထွက်ပြီ) မိုးမခစာအုပ်စင်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၈၊...
Dr. Maung Maung Gyi on ကိုသန်းလွင် ● ဖက်ဆစ်ဝါဒတားဆီးရေး
Dr. Maung Maung Gyi on မောင်စွမ်းရည် ● ယောက္ခမ ယောက္ခထီး
ZaWaRee (ဇာဝါရီ) on ဇာဝါရီ ● လူငယ်များဖတ်ဖို့ (ကြည့်မြင်တတ်ပါ)
MT on ဇာဝါရီ ● လူငယ်များဖတ်ဖို့ (ကြည့်မြင်တတ်ပါ)
Maung Swan Yi Myanmar Now ကချင် ကမ်လူဝေး ကရင် ကာတွန်း - KZZH ကာတွန်း Joker ကာတွန်း OKKW ကာတွန်း ကိုခေတ် ကာတွန်း ညီပုချေ ကာတွန်း ညီထွေး ကာတွန်း မင်းထက်လူ ကာတွန်း မိုးသွင် ကာတွန်း ဆွေသား ကာတွန်း ရွှေဗိုလ် ခက်ဦး ချင်း ဆန်ဖရန် ထက်ခေါင်လင်း (Myanmar Now) ထင်အောင် ဒီလူည ဘင်္ဂလီ ဘင်္ဂါလီ မင်းကိုနိုင် မာမာအေး မိုးသွင် မွန် ရခိုင် ရခိုင် ရခုိုင် ရိုဟင်ဂျာ ရှမ်း လင်းသက်ငြိမ် သွန်းခ အင်တာဗျူး အရှင်စန္ဒိမာ (မွန်စိန်တောရ) အိချယ်ရီအောင် (Myanmar Now) ဦးကိုနီ မောင်ဥက္ကလာ မောင်မောင်လတ် (ရွှေအင်းလေးစာပေ) သောင်းပြောင်းထွေလာ အောင်သူငြိမ်း ပြည်တွင်းစစ် ၂၁ ရာစု ပင်လုံ ဖြိုးသီဟချို (Myanmar Now)